यी हुन् पछिल्लो समय भएका नेपालका ६ इन्काउन्टर !अब को को छन प्रहरीको निशानामा?(हेर्नुहोस) – Complete Nepali News Portal
यी हुन् पछिल्लो समय भएका नेपालका ६ इन्काउन्टर !अब को को छन प्रहरीको निशानामा?(हेर्नुहोस)
Kamal Sargam February 23, 2018
गुण्डागर्दी तथा अपराधमा संलग्नलाई प्रहरीले इन्काउन्टर गर्दै आएको छ । इन्काउन्टर गर्ने प्रहरीभित्रको विश्वव्यापी मान्यता हो । पक्राउ गर्न खोज्दा वा आफुमाथि जाईलाग्दा प्रहरीले जवाफी कारवाही गर्ने गरेको छ । नेपाल प्रहरीले पछिल्लो वर्षहरुमा चर्चित गुण्डाहरुको यसरी नै इन्काउन्टर गर्दै आएको छ । विगत ४ वर्षमा प्रहरीले ६ वटा इन्काउन्टर गरेको पाईन्छ । जसमा ५ जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते भएका छन् । हेर्नुस् भिडियो –